Fanoherana ny «Tana-Masoandro» :: Fanimban-javatra, fisamborana, baomba mandatsa-dranomaso teny Ambohitrimanjaka • AoRaha
Fanoherana ny «Tana-Masoandro» Fanimban-javatra, fisamborana, baomba mandatsa-dranomaso teny Ambohitrimanjaka
Raikitra ny savorovoro teo amin’ny manodidina an’Anosibe Zaivola sy ny tetezana Ambohitrimanjaka, omaly hariva, vokatry ny fanoherana ny fananganana ilay fotodrafitrasa lehibe, “Tanà-Masoandro”. Voatery nifanandrina ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena. Nirefodrefotra ny baomba nandatsa-dranomaso. Tora-bato kosa no navalin’ireo mponina manohitra an’izany tetikasa izany.
Nisy ny fisamborana ka olona sivy tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana no voalazan’ny kolonely Ravoavy Zafisambatra, talen’ny filaminana sy ny angom-baovao ao amin’ny fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena, fa nosamborina hatramin’ny alina, hanaovana fanadihadiana.
Ankoatra izay, maro ihany koa ireo fitaovana sy fiara simba vokatr’io fifandonana io. Olona iray avy amin’ny mpanao fihetsiketsehana no naratra, raha efatra kosa ny an’ny Zandarimariam-pirenena.
Ny maraina ary nitohy ny tolakandro dia nanao ny fihetsiketsehana toy ny fanaony ireo mponina manohitra an’ity tetikasa ity. Ny tolakandro dia nanomboka nihantsy an’ireo mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana voalaza nanala an’ireo fitaovana, toy ny vato tokony hanamboarana ny tetezana teny an-toerana, isan’ireo fotodrafitrasa haorina ho an’ny fananganana ny “Tanà-Masoandro”. Natsipin’izy ireo tao anaty rano ireo fitaovana ireo ka voatery niditra an-tsehatra nanakana izany ireo mpitandro filaminana. Nandamin-dresaka aloha izy ireo ary nanatona an’ireto mponina ireto. Tsy nety nilamina anefa ireo olona ka raikitra ny tora-bato ka nitsoaka ireo zandary saika handamin-dresaka. Teo no nanomboka ny fifandonana sy ny fipoahan’ny baomba mahalatsa-dranomaso.
Miady amin’ny fahafatesana
Ny roa tamin’ireo zandary ireo no tafavoaka ary ny roa kosa taraiky tany anaty vahoaka niharan’ny hatezeran’ireo mpanao fihetsiketsehana ka naratra mafy ary miady amin’ny fahafatesana etsy amin’ny hopity Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra).
Mbola vitsy an’isa ireo zandary teny an-toerana tamin’io, araka ny nambaran’ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (SEG), nitantara ny zava-nisy teny amin’ny Hjra nijery ireo zandary naratra. Voatery niantso namana hanampy azy ireto mpitandro filaminana ireto taorian’ny fifandonana ka nanavotra ireo namany. “Iray no naratra avy tamin’ny mpanao fihetsiketsehana, izay tombanana ho vokatry ny fianjerana”, hoy hatrany izy.
Nampitandrina avy hatrany ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena omaly fa: “na iza na iza ambadik’izao raharaha naharatrana zandary izao dia tsy hitsitsy izahay fa hisambotra”.
Nisy ihany koa ireo naratra avy tamin’ireo andian’olona teny an-toerana. Fiara maro nandalo teny no nisy nitoratoraka ka nahasimbana zavatra betsaka. Nihorohoro ireo olona sendra nandalo. “Efa milamina ny raharaha ety amin’izao. Manome toky an’ireo mponina izahay fa afaka manohy ny fiainany andavanandro satria efa nampitomboina ny isan’ireo zandary sy mpitandro filaminana, eny an-toerana”, araka ny nambaran’ny kolonely Ravoavy Zafisambatra hatrany.
Hiditra an-tsehatra ireo depiote IRD
Tapa-kevitra ny hidina eny ifotony hanantona sy hiresaka ary handresy lahatra an’ireo mponina manodidina an’Ambohitrimanjakana mikasika ny fanorenana an’ilay tanàn-dehibe “Tanà-Masoandro”, ireo depiote eo anivon’ny vondrona politika miara-dia amin’ny FilohaRajoelina Andry (Ird). Noho ny fanoheran’ny sasany amin’ireo mponina eny an-toerana ny fananganana an’ireo fotodrafitrasa goavana nampanantenain’ny Filohan’ny Repoblika ity no anton’izany fanapahan-kevitra izany. Anio no hanomboka hihaona amin’ireo mponina eny an-toerana ireto depiote akaikin’ny fitondrana ireto.
Raharaha Paul Razanakolona